सुशान्त प्रकरणमा नयाँ खुलासा: सुशान्तको मृत्यु मुम्बईमा भएको थिएन? लास ल्याएर फ्ल्याटमा राखिएको दाबी । - Supportive Nepal
सुशान्त प्रकरणमा नयाँ खुलासा: सुशान्तको मृत्यु मुम्बईमा भएको थिएन? लास ल्याएर फ्ल्याटमा राखिएको दाबी ।
April 8, 2021 News NepalLeaveaComment on सुशान्त प्रकरणमा नयाँ खुलासा: सुशान्तको मृत्यु मुम्बईमा भएको थिएन? लास ल्याएर फ्ल्याटमा राखिएको दाबी ।
बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको नि’धन भएको तीन महिना बढी बितिसकेको छ। अझैसम्म पनि सि’बिआई पुलिसले उनको मृ’त्युको र’हस्य पहिल्याउन सकेको छैन। सि’बिआई हेरेक को’णबाट सुशान्तको मृ’त्युसँग ।
जोडिएका कुराहरू पता लगाउन लागिपरेको छ। आखिर के त्यस्तो भयो? जसले गर्दा सुशान्तले आफ्नो ज्या’न गु’माउनु पर्यो। यसैबीच सुशान्त के’समा अगाडि आएको ड्र’ग मा’मिलामा अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती लगायत ।
अन्यलाई हि’रासतमा राखिएको छ। टाइम्स नाउको रिपोर्टका मुताबिक, सुशान्त के’समा सि’बिआईलाई केही ग’डबड महसुस भएको छ। सुशान्तका स्टाफहरूले गलत बयान न दिइरहेका छैनन्? सुशान्त १४ जुनका दिन आफ्नो ।
मुम्बईस्थित फ्ल्याटमा मृ’त भेटिएका थिए। खबरका अनुसार सुशान्तले १३ जुनदेखि नै कसैको फोन र मेसेजको रिप्लाई गरिरहेका थिएनन्। यो कुरा उनकी दिदी मीतूले पनि बयानमा भनिसकेकी छन्। छिमेकीहरूले सुशान्तको घरको ।
बत्ती १३ जुनका दिन अन्य दिनभन्दा चाँडै निभेको र घरमा स’न्नाटा छाएको बताएका छन्। कुक नीरजले १४ जुनका दिन बिहान सुशान्तलाई नारिवल जु’स दिएको बताएका थिए तर हालै आएको पीएम रि’पोर्टमुताबिक सुशान्तको ।
पि’साब थैली खाली पाइएको थियो। सुशान्तको रि’पोर्ट र उनको बारेमा बताइएका कुराहरूबीच मेल नहुँदा सुशान्तको मृ’त्युलाई लिएर अनेक सवालहरू उठिरहेका छन्। पछिल्लो अपडेटअनुसार, सुशान्तको मृ’त्यु उनको मुम्बईस्थित ।
फ्ल्याटमा नभएर उनको लो’नावलाको फा’र्महाउसमा भएको दाबी गरिएको छ । केही स्रोतहरूले सुशान्तको नि’धन फार्महाउसमा भएको र पछि ला’स मुम्बईस्थित फ्ल्याटमा ल्याइएको दा’बी गरेका छन्। समाचारमा कत्तिको सच्चाई छ त्यो अझैसम्म पु’ष्टि भैसकेको छैन।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने माओवादीको नयाँ रणनीति
भर्खरै विमान दु’र्घटना हुँदा १४ जनाको मृ’त्यु, मनमा माया भए #RIP लेख्नुहाेस
January 6, 2021 January 6, 2021 News Nepal
आयो दुखत खबर: लोक गायक पशुपति शर्मालाई कोरोनाले अस्पतालमा पुर्‍यो
February 24, 2021 News Nepal